के तपाईको राती सुत्दा घुर्ने बानी छ ? यस्ता छन् कारणहरु, जानी राखौ
मानिस किन घुर्छ ?
सेप्टेम्बर 11, 2019 सेप्टेम्बर 11, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments घुर्ने बानी, मानिस
धेरै मानिसमा सुत्दा घुर्ने बानी हुन्छ । निदाउँदा आफू घुरिरहेको छु भन्ने उनीहरूलाई थाहा पनि हुँदैन । घुर्ने बानीले सँगै सुत्ने साथीलाई निदाउन समस्या हुन्छ । मानिस सुतेर निधाएको बेलामा स्वास लिँदा आफ से आफ निस्कने एक प्रकारको आवाजलाई घुर्नु ( स्नोरिङ ) भनिन्छ । निदाउँदा घुर्ने आफैँमा ठूलो समस्या वा रोग होइन । पछिल्लो समयमा बैज्ञानिकहरुले घुराई आफैमा रोग नभएपनि रोगको संकेत हो भनेर भनेका छन् । बढी घुर्ने व्यक्तिमा कुनै न कुनैको समस्या हुन्छ भनेर जान्दा हुन्छ भन्ने बैज्ञानिकहरुको तर्क छ । त्यसैले बढी घुर्ने व्यक्ति आफ्नो स्वास्थयमा बढी चनाखो हुनु जरुरी छ ।
यदि मानिसले सुत्नुभन्दा पहिले जाँडरक्सी खायो भने उसको जिब्रोको मोटाइमा केही हदसम्म बृद्धि हुन्छ । सुत्दा पनि त्यो जिब्रो अलिक पछाडि धकेलिन्छ । यसले श्वासप्रश्वास स्वतन्त्र रुपमा हुन सक्दैन । त्यही भएर रक्सी खाने मानिस धेरै घुर्छन् । गहिरो निद्रामा परेको बेला पनि कहिलेकाहीँ यस्तो हुने गर्छ । मानिस घुर्नुको अर्को कारण भनेको मानिसको घाँटीको टिस्युमा हुने बृद्धि पनि हो । विशेष गरेर मोटो मानिसमा यस्तो समस्या देखापर्छ । त्यही भएर दुब्ला मानिसका तुलनामा मोटो मानिस धेरै घुर्ने गर्छन् । रुघा लागेको वा पिनासको समस्या भएको मानिस पनि घुर्ने गरेका पाइएको छ । नाकबाट खुला रुपमा श्वासप्रश्वास हुन नपाएपछि यस्ता समस्याबाट ग्रसित मानिसहरु घुर्न थाल्छन् । कहिलेकाहीँ त नाकमा जम्ने फोहोरको कारणले पनि यस्तो समस्या देखा पर्छ ।
मानिसले नाक-मुखका माध्यमबाट श्वासनली हुँदै स्वतन्त्र रूपमा हावा शरीरभित्र जान्छ । सोही प्रक्रियामा त्यहाँको विकार हावा बाहिर निस्कन्छ । तर, कुनै मानिसको श्वासनली सुतेका वेला थर्किन्छ । त्यसरी थर्कंदा जिब्रो पछाडि धकेलिन्छ । जिब्रो पछाडि गएर श्वासनली झनै साँघुरिँदा मानिसमा घुर्ने समस्या हुन्छ । सामान्यतया घुर्ने मात्र समस्या छ भने त्यसले आफूलाई कुनै हानिनोक्सानी गर्दैन । तर, घुराइसँगै मानिसमा श्वास रोकावट हुने समस्या छ भने त्यसले ठूलो जोखिम ल्याएको हुन्छ । जस्तो, मानिस घुर्दा ५ देखि १० सेकेन्डका लागि श्वास रोकिन्छ । यसलाई एप्निया भनिन्छ । एप्निया कस्तो अवस्थामा छ भनेर चिकित्सकले एक रात सुताइको अध्ययन (स्लिप स्टडी) गर्दछन् । सोही अनुसारको उपचार पद्धति अपनाउन सकिन्छ ।
आफूभन्दा पनि अरूलाई बढी असर पार्ने यो समस्या नेपालमा ३० प्रतिशत पुरुष र २० प्रतिशत महिलामा रहेको विभिन्न प्रतिवेदनले देखाएका छन् । घुर्ने बारेमा पश्चिमा देशमा रोचक तथ्य छ । ७०-८० को दशकमा बेलायतमा लोग्ने स्वास्नी बीच पारपाचुके निकै बढेर गयो । आफैले रोजेर प्रेम विवाह गर्ने संस्कृति बोकेको मुलुकमा यसरी एकाएक घरबार टुक्रिने कारण खोज्न राज्यले उच्चस्तरीय समिति बनायो त्यसबाट थाह भयो ७५ प्रतिशत पारपाचुके हुनुको कारण त्यहि घुराई नै रहेछ । कारण थाहा पाएपछि बेलायतीहरुले घुर्नुलाई पनि स्वास्थ्य समस्याको रुपमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाए ।
घुर्ने समस्याको कारणहरू र यसले निम्त्याउने जोखिमहरू
← आफुले आफुलाई खुसी राख्न गर्नुपर्ने दिनचर्याहरु
स्वास्थ्यको लागि मेवा खानुका फाइदाहरु →